प्रचण्ड पत्नि सीता दाहालको स्वास्थ्य समस्या के हो ? जान्नुहोस – Dainik Sangalo
प्रचण्ड पत्नि सीता दाहालको स्वास्थ्य समस्या के हो ? जान्नुहोस
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ०६, २०७८ समय: १६:५५:२१
काठमाडौं । नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको स्वास्थ्य अबस्था त्यति ठिक छैन । घरमै उपचार भईरहेकाे छ । प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्य विष्णु सापकोटा (जुगल) का अनुसार सीताको उपचार अमेरिकाको जोन हकिङ्स् अस्पतालमा उपचार हुदै आएको छ ।
छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि सीतालाई रोगले झन च्यापेको छ । त्यसैले सीताको मन बहलाउन प्रचण्डले बेला–बेला विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लैजान्छन् ।
केही बर्ष अघि रामबहादुर थापा बादलसहित प्रचण्ड र सीता म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा पुगेर स्नान गरेको तस्वीर समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सीताको उपचारकै सिलसिलामा तातोपानी कुण्डमा पुगेको प्रचण्ड परिवारका सदस्य बताउँछन् ।
Last Updated on: August 22nd, 2021 at 4:55 pm